'ओ'को साटो 'बी पोजिटिभ' रगत चढाउदा सुत्केरी महिलाको मृत्यु
चिकित्सक तथा रेडक्रसकर्मीको लापरवाहीका कारण जनकपुरमा एक जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ ।
जनकपुरको एउटा निजी अस्पताल राम जानकी हस्पिटलमा भर्ना भएकी प्रसुती महिलालाई गलत ब्लड ग्रुपको रगत चढाएका कारण मृत्यु भएको छ ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर ११ की २१ बर्षीय गंगा देवी महतोको शुक्रबार ९ बजे मृत्यु भएको छ । ‘ओ पोजिटिभ’ ग्रुपको रगत चढाउनु पर्ने ठाउँमा ‘बी पोजेटिभ’ ग्रुपको रगत चढाउँदा बिरामीको मृत्यु भएको हो ।
मृतक गंगाको पति राज किशोर महतोका अनुसार प्रसुती श्रीमतीको डेलिभरी गराउनका लागि हिजो बिहीबार ४ बजे उक्त अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
अपरेसन गरेर बच्चाको डेलिभरी गर्नु पर्छ भनेर चिकित्सकले भनेका कारण पहिले देखि नै रगत ल्याएर राख्न उनलाई चिकित्सकले भनेका रहेछन् ।
गंगाको ब्लड ग्रुपको त्यहाँ अस्पतालका चिकित्सकले म्याच गर्दा बी पोजेटिभ ग्रुपको रहेको बताएका थिए ।
‘मेरो पनि लाइसेन्समा बी पोजेटिभ नै रहेको कारण आफ्नो रगत दिएर रगत लिने भन्दै मलाई अस्पतालको चिकित्सकले मेरो श्रीमतीको स्याम्पल समेत दिएर रेडक्रसको ब्लड बैंकमा पठायो,’ राज किशोरले लोकान्तर सँग भने,‘प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको रेडक्रसको ब्लड बैंकमा मैले एक पोका रगत दिएर त्यहाँ बाट बी पोजेटिभ ग्रुपको एक पोका रगत लिएर आएँ ।’
उक्त एक पोका रगत चढाएर चिकित्सकले बिहीबार साँझ ७ बजे तिर गंगाको शल्यक्रिया गरेर बच्चाको रुपमा उनले छोरी पाएको थियो । खुशी भएका राजकिशोरले चिकित्सकलाई मेरो श्रीमतीको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्न जाँदा सबै कुरा ठीक छ, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर जबाफ दिएका कारण आफू ढुक्क भएर बसेको उनी बताउँछन् ।
तर,अचानक रातको ११ बजे तिर मेरो श्रीमतीलाई अचानक आईसीयूमा भर्ना गर्यो । राती ३ बजे तिर अचानक तपाईंको श्रीमतीको ब्लड ग्रुप ओ पोजेटिभ छ, गलत ग्रुपको रगत चढ्यो, अर्को एक पोका ओ पोजेटिभ ग्रुपको रगत लिएर आउनुस् भनेर चिकित्सकले उनलाई भने ।
बिरामीको अवस्था खराब भई रहेको छ त्यसैले छिट्टै रगत लिएर आउनुस् भनेर त्यहाँका चिकित्सकले उनलाई भनेका रहेछन् ।
‘त्यस पछि मेरो भाइ राम हरी महतोले बी पोजेटिभ ग्रुपको एक पोका रगत दान गरेर पछि ओ पोजेटिभ ग्रुपको रगत लिएर अस्पतालमा दिएका थियौं,’ राजकिशोरले भने,‘त्यस पछि त प्लास्टिकको प्लास्टिक औषधि किनेर दिएका थियौं ।’
रात भरी औषधि किनेर अस्पतालमा ओसारेका राज किशोरलाई शुक्रबार बिहान ८ बजे तिर बिरामीको अवस्था धेरै सिकिस्त छ, अब हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भनेर चिकित्सकले उनलाई जबाफ दिएका थिए ।
उक्त अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत रहेका चिकित्सक डा. दीपेन्द्र मेहताले पनि ब्लड ट्रान्स्फ्यूजनका कारण बिरामीको मृत्यु भएको बताउँछन् । ‘बिरामीको ब्लड ग्रुप ओ पोजेटिभ हो तर शुरूमा बी पोजेटिभ रगत चढाइएको कारण बिरामीमा एक्युट रिएकसन देखा पर्यो,’ डा. मेहताले भने,‘त्यस पछि बिरामी एनाफेलाक्सिस(शोक)मा गयो र ब्लड प्रेसर पनि गयो ।’
बिरामीलाई बचाउन भेन्टिलेटरमा समेत राखियो तर आज शुक्रबार बिहान ९ बजे उनको मृत्यु हुन पुगेको उनले बताए ।
‘शुरुमा अस्पतालले बी पोजेटिभ ग्रुपको भनेर बिरामी पक्षलाई भने पनि रेड क्रसले ब्लड ग्रुप स्याम्पल साथ म्याच गरेर मात्र पठाउने तथा त्यो नै अन्तिम निष्कर्ष समेत हुने हुनाले आफूहरुले पनि म्याच गरेर नै ब्लड बैंकले रगत दिएको होला भनेर ढुक्क भएर बी पोजेटिभ रगत नै चढायौँ,’ डा. मेहताले भने,‘हाम्रो लापरबाही भन्दा पनि रेडक्रस ब्लड बैंकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको हो । ’ यस सन्दर्भमा रेडक्रस धनुषाका सभापति नरेश प्रसाद सिंह सँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल स्विच ओफ रहेका कारण उनी लोकान्तरको सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् ।
मृतकका श्रीमानले मृतकको शब बुझ्न अस्वीकार गरेका छन । घटनाको छानबिन गरेर दोषी चिकित्सक तथा रेडक्रसकर्मीलाई कारबाही हुनु पर्ने तथा आफूहरुले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने भन्दै आफ्नो श्रीमतीलाई न्याय नदिए सम्म शब नबुझ्ने मृतकका श्रीमान महतोले बताए ।
पार्टी प्रवक्ताको लाज जोगाउन नारायणकाजीलाई सुझाव दिँदै ओलीका सल्लाहकारको यस्तो ट्वीट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रवक्ता पदको लाज जोगाउन नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई सुझाव दिएका छन् ।
'इनअफ इज इनअफ' भन्दै शुक्रवार ट्वीट गरेका रिमालले श्रेष्ठलाई गुटबन्दीको आगोमा उत्तोलक नबन्न सुझाव दिएका हुन् ।
'कम से कम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुस् । ‘विधि र पद्दति’को नक्कली गीत गाउँदै नेताहरूलाई गुटबन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुहोस् ! पार्टी एकताविरुद्धका कुनैपनि गतिविधि कतैबाट पनि नहोस् !! मुलुक संवेदनशील मोडमा छ महसूस होस्!!!' रिमालले लेखेका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ ओलीइतर खेमामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँगै देखिँदै आएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने अत्यावश्यक बाहेकका अन्य कामहरू बन्द हुने भएका छन् ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको शुक्रवार बसेको बैठकले उपत्यकामा रहेका ३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अत्यवश्यक सेवाहरू बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि आइतवारदेखि लागू हुने गरी सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको भक्तपुर जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुमकला पाण्डेले लोकान्तरलाई बताइन् ।
अन्य कार्यालयहरूको हकमा भने सम्बन्धित कार्यालयले नै निर्णय गर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
यस्तै उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा विशेष कडाइ गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाका कारण थप ५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।
शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ५ जनाको मृत्यु भएको बताएका हुन् ।
मृत्यु हुनेमा पर्सा जिल्लाका ४५ वर्षीय पुरुष, वीरगंज महानगरपालिकाका ७९ वर्षीय पुरुष, वीरगंजकै ५७ वर्षीय पुरुष, सिराहाका २५ वर्षीय पुरुष र सर्लाहीका ४५ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
यससँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७० पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ६४ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।
शुक्रवार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ४ सय ६४ मा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएका हुन् ।
यससँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ हजार ३ सय ३० पुगेको छ ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणमुक्त भएर हालसम्म १५ हजार ८ सय ४१ डिस्चार्ज भएका छन् ।